Nhau - Chii chinonzi 2.4G isina waya module Ndeupi musiyano uripo pakati pe433M ne2.4G waya isina waya?
Chii chinonzi 2.4G isina waya module Ndeupi musiyano uripo pakati pe433M ne2.4G waya isina waya?
Kune akawandisa uye asina waya mamowuru pamusika, asi iwo anogona kunge akaganhurirwa muzvikamu zvitatu:
1. BVUNZA superheterodyne module: isu tinogona kushandiswa seyakareruka kure kudzora uye data kufambisa;
2. Wireless transceiver module: Inonyanya kushandisa imwechete-chip microcomputer kudzora isina waya module kutumira uye kugamuchira data. Iwo anowanzo shandiswa modulation modhi ari FSK uye GFSK;
3. Iyo isina waya dhata yekufambisa module inonyanya kushandisa serial port maturusi ekugamuchira nekutumira data, izvo zviri nyore kuti vatengi vashandise. Wireless ma module pamusika ave kushandiswa zvakanyanya, aine frequency e230MHz, 315MHz, 433MHz, 490MHz, 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, nezvimwe.
Ichi chinyorwa chinonyanya kuzivisa chimiro cheiyo 433M uye 2.4G ma-module asina waya. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuziva kuti iyo frequency renji ye433M iri 433.05 ~ 434.79MHz, nepo huwandu hwehuwandu hwe2.4G iri 2.4 ~ 2.5GHz. Ivo vese ISM-isina rezinesi (maindasitiri, sainzi uye zvekurapa) akavhurika mafrizheni mabhendi muChina. Izvo hazvidikanwe kushandisa aya frequency mabhendi. Inoda kunyorera kupihwa mvumo kubva kunhepfenyuro redhiyo manejimendi, saka aya maviri mabhendi ave achishandiswa zvakanyanya.
Chii chinonzi 433MHz?
Iyo 433MHz isina waya transceiver module inoshandisa yakakwira-frequency radio frequency tekinoroji, saka inonziwo RF433 radio frequency diki module. Iyo inoumbwa neiyo imwe IC radio frequency kumberi kumagumo inogadzirwa neese-dijitari tekinoroji uye ATMEL's AVR imwechete-chip microcomputer. Iyo inogona kuendesa dhata masaini nekumhanyisa, uye inogona kupaka, kutarisa uye kugadzirisa iyo data inopfuudzwa zvisina waya. Izvo zvinhu zvese zveindasitiri-giredhi zviyero, zvakagadzikana uye zvakavimbika mukushanda, zvidiki muhukuru uye nyore kuisa. Iyo inokodzera nzvimbo dzakasiyana siyana senge chengetedzo alarm, isina waya otomatiki mita kuverenga, kumba uye maindasitiri otomatiki, kure kure kudzora, isina waya kudhinda data uye zvichingodaro.
433M ine yakakwira yekugamuchira kunzwisisika uye yakanaka kusiyanisa kuita. Isu tinowanzo shandisa 433MHz zvigadzirwa kuita tenzi-varanda ekutaurirana masisitimu. Nenzira iyi, tenzi-muranda topology inotova imba yakangwara, iyo ine zvakanakira nyore dhizaini dhizaini, nyore dhizaini, uye ipfupi simba-nenguva. 433MHz uye 470MHz izvozvi zvinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekuverenga mita yekuverenga.
Kushanda kwe433MHz mune smart imba
1. Kudzora Mheni
Iyo isina waya redhiyo frequency mwenje yekudzora system inoumbwa neye smart paneli switch uye dimmer. Iyo dimmer inoshandiswa kutumira uye kugamuchira ekuraira masaini. Iwo mirairo inopfuudzwa newairesi pachinzvimbo chetambo yemagetsi. Imwe neimwe switch switch ine yakarongedzwa neakasiyana remote control identification kodhi. Aya macode anoshandisa 19-bit kuzivikanwa tekinoroji kugonesa iye anogamuchira kunyatsoziva iwo wega murairo. Kunyangwe kana vavakidzani vakaishandisa panguva imwe chete, hakuzove nekukanganisa kutapurirana nekuda kwekukanganiswa kubva kwavo kure kudzora.
2. Wireless Smart Chigadziko
Iyo isina waya smart socket nhepfenyuro inonyanya kushandisa isina waya radio frequency tekinoroji kuti ione iko kure kudzora kwesimba rezvinhu zvisiri-kure kudzora zvishandiso (senge mvura yekupisa mvura, mafeni emagetsi, nezvimwewo), izvo kwete kwete chete zvinowedzera mashandiro easina waya kure kudzora kune aya midziyo yemagetsi, asi zvakare inochengetedza simba kusvika pamwero mukuru uye inovimbisa kuchengetedzeka.
3. Ruzivo rwemidziyo yekushandisa
Ruzivo rwekushandisa michina ndeye multifunctional kure kudzora system iyo inosanganisa infrared kutonga uye isina waya kutonga. Inogona kudzora anosvika mashanu infrared michina (senge: TV, mhepo inodzikamisa, DVD, simba gudzazwi, machira, nezvimwewo) uye zvisina waya zvishandiso senge switch uye zvigadziko. Iye anodzidzisa mudziyo mudziyo anogona kuendesa macode eiri kure kudzora zvakajairika infrared midziyo yemidziyo kuburikidza nekudzidza kutsiva iyo yekutanga appliance iri kure kudzora. Panguva imwecheteyo, iri zvakare isina waya kure kudzora, iyo inogona kuendesa masimba ekudzora neakawandisa e433.92MHz, saka inogona kudzora smart switch, masokisi akangwara uye vasina waya infrared transponders mune ino frequency band.
Iyo 2.4GHz yekunongedzera poindi ndeye network network protocol yakagadziridzwa zvichibva pairi yekumhanyisa-kumhanyisa yekufambisa chiyero.
Zvese mune zvese, isu tinokwanisa kusarudza ma module ane akasiyana mafambiro zvichienderana nenzira dzakasiyana dzekudyidzana. Kana iyo nzira yekubatanidza iri nyore uye zvinodiwa zviri nyore, tenzi mumwe ane varanda vakawanda, mutengo wakaderera, uye nharaunda yekushandisa yakanyanya kuomarara, tinogona kushandisa 433MHz isina waya module; kutaura zvishoma, kana iyo network topology yakanyanya kuomarara uye ichishandira A akasiyana zvigadzirwa zvine simba network kusimba, yakaderera simba rekushandisa zvinodiwa, yakapusa budiriro, uye 2.4GHz network network basa ichave yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Post nguva: Jun-05-2021